Inoki Akafamba naMwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO | INOKI
“Akanga Anyatsofadza Mwari”
INOKI akanga ararama kwemakore akawanda. Zvingatiomera kubvuma kuti murume uyu akararama makore 365. Kana tikazvienzanisa nemazuva ano, akararama upenyu hunopfuura hwezvizvarwa 4! Asi kana tikazvienzanisa nemakore airarama vanhu kare ikako, Inoki ainge asina kuchembera. Iye zvino patopfuura makore 5 000, uye kare ikako vanhu vairarama kwenguva yakareba. Adhamu akanga atova nemakore anopfuura 600 pakaberekwa Inoki, uye Adhamu akazoraramazve mamwe makore 300! Vamwe vana vaAdhamu vakatorarama makore aipfuura ipapo. Saka Inoki paakasvitsa makore 365 anogona kunge aiva achakasimba, achitarisira kurarama mamwe makore akawanda. Asi haana kuzomboenda kure.
Inoki akanga abatira ura mumaoko. Ita seuri kumuona achitiza, mupfungwa dzake ari kuona kushatirwa kwevanhu vaainge achangobva kuudza mashoko aMwari. Vanhu ivavo vaimuvenga. Havana kufarira zvavakaudzwa uye vaivenga Mwari ainge amutuma. Hapana zvavaikwanisa kuita Jehovha, Mwari waInoki, asi munhu wavaikwanisa kurwisa, ndiInoki! Zvimwe Inoki ainetseka kuti aizoonazve mhuri yake here. Aifunga nezvemudzimai wake nevanasikana vake here kana kuti nezvemwanakomana wake Metusera kana muzukuru wake Rameki? (Genesisi 5:21-23, 25) Aizopona here?
Bhaibheri haritauri zvakawanda nezvaInoki. Panongova nendima shomanana chete dzinotaura nezvake. (Genesisi 5:21-24; VaHebheru 11:5; Judha 14, 15) Kunyange dziri shoma, dzinotiratidza kuti murume uyu aiva nekutenda kukuru. Une mhuri yaunoriritira here? Wakamboomerwa here nekuita zvinhu zvaunoziva kuti ndizvo zvakanaka? Unogona kudzidza zvakawanda kubva pakutenda kwaInoki.
“INOKI AKARAMBA ACHIFAMBA NAMWARI WECHOKWADI”
Makore akararama Inoki, zvinhu zvakanga zvawedzera kuipa. Inoki aiva wechizvarwa chechi7 kubva kuna Adhamu. Panguva iyoyo vanhu vairarama kwenguva refu, nekuti chivi chavakawana kuna Adhamu naEvha chakanga chisati chadzika midzi. Asi tsika dzavo dzakanga dzaora uye vasisanamati Mwari. Kwese kwese vanhu vakanga vava kungorwisana. Izvi zvakatanga naKaini aiva wechizvarwa chechipiri, paakauraya munin’ina wake Abheri. Mumwe wevazukuru vaKaini anofanira kunge aitozvikudza neutsinye hwaakaita kudarika hwaKaini! Pachizvarwa chechitatu, zvinhu zvakatowedzera kuipa. Vanhu vakatanga kudana zita raJehovha, asi kwete nechinangwa chekumunamata. Zviri pachena kuti vaishandisa zita dzvene raMwari vachirizvidza panzvimbo pekuti variremekedze.—Genesisi 4:8, 23-26.
Kunamata kwenhema ikoko kunogona kunge kwakanga kwazara panguva yakararama Inoki. Saka paaikura, aifanira kusarudza zvekuita. Aizobatana nevanhu ivavo here, kana kuti aizotsvaka Mwari wechokwadi, Jehovha, Musiki wedenga nenyika? Paakanzwa kuti Abheri ainge aurayiwa nemhaka yekushumira Jehovha, zvinofanira kunge zvakamukurudzirawo kuti atange kunamata Jehovha. Genesisi 5:22 inotiudza kuti: “Inoki akaramba achifamba naMwari wechokwadi.” Mashoko aya anonyatsoratidza kuti Inoki ainamata Jehovha kunyange zvazvo airarama pakati pevanhu vakanga vakaipa. Ndiye wekutanga kutsanangurwa saizvozvo muBhaibheri.
Vhesi imwe chete iyoyo inoti Inoki akaramba achifamba naJehovha kunyange pashure pekubereka Metusera. Inoki paakanga ava nemakore anenge 65 ndipo paakabereka Metusera. Mudzimai wake haataurwi nezvake muMagwaro, uye “vanakomana nevanasikana” vaInoki havataurwi kuti vaiva vangani. Kuti baba vafambe naMwari vachirera mhuri yavo, vanofanira kuedza kuitungamirira maererano nezvinodiwa naMwari. Inoki aiziva kuti aifanira kuramba akavimbika kumudzimai wake nokuti ndizvo zvaidiwa naJehovha. (Genesisi 2:24) Uye akaita zvose zvaaigona kuti adzidzise vana vake nezvaJehovha Mwari. Zvakabatsira here?
Bhaibheri haritauri haro zvakawanda nezvazvo. Haritauri nezvekutenda kwemwanakomana wake Metusera, uyo akararama kwemakore akawanda kupfuura vanhu vose vanotaurwa muBhaibheri, kusvika azofa mugore rakauya Mafashamo. Metusera akabereka mwanakomana ainzi Rameki. Rameki akararama makore anopfuura 100 Inoki achiri mupenyu. Rameki aiva nekutenda kwakasimba. Jehovha akaita kuti Rameki ataure uprofita hwaiva nechekuita nemwana wake Noa, uye uprofita ihwohwo hwakazadzika pashure peMafashamo. Noa akanziwo aiva murume aifamba naMwari sezvakaita sekuru vake Inoki. Noa haana kumbobvira aonana naInoki. Asi zvakanaka zvakaitwa naInoki hazvikanganwiki. Baba vake Rameki kana kuti sekuru vake Metusera ndivo vanogona kunge vakamuudza nezveupenyu hwaInoki. Mumwe anogona kunge akamuudza ndiJaredhi baba vaInoki, avo vakafa Noa paaiva nemakore 366.—Genesisi 5:25-29; 6:9; 9:1.
Funga nezvemusiyano uri pakati paInoki naAdhamu. Adhamu akasikwa asina chivi, asi akatadzira Jehovha achibva apinza vana vake mumatambudziko uye zvaakaita zvakaita kuti vana vake vazodawo kupandukira Mwari. Inoki aiva nechivi, asi akafamba naMwari uye akasiyira vana vake muenzaniso wakanaka wekutenda. Adhamu akazofa Inoki ava nemakore 308. Kutadza kwakaitwa naAdhamu kunoratidza kuti aingofunga zvakamunakira. Saka paakazofa, mhuri yake yakamuchema here? Hatizivi. Chatinoziva ndechokuti Inoki “akaramba achifamba naMwari wechokwadi.”—Genesisi 5:24.
Kana uine mhuri, tarisa uone zvaungadzidza kubva pakutenda kwaInoki. Kunyange zvazvo zvakakosha kuti uriritire mhuri yako, chinotonyanya kukosha kuitungamirira pakunamata. (1 Timoti 5:8) Zvaunotaura uye zvaunoita ndizvo zvinoratidza kuti uri kuitungamirira pakunamata. Kana ukasarudza kufamba naMwari uchibvuma kutungamirirwa naye sezvakaitwa naInoki, uchaita kuti mhuri yako isafa yakakukanganwa uye icharamba ichida kukutevedzera.
INOKI “AKAPROFITAWO PAMUSORO PAVO”
Sezvo vanhu vairarama panguva yaInoki vakanga vasina kutenda, Inoki anogona kunge aizviona sezambiringa munyemba. Asi Mwari wake Jehovha aimuona here? Ehe. Rimwe zuva, Jehovha akataura nemushumiri wake akavimbika. Akamupa mashoko ekuti audze vanhu. Akabva aita kuti Inoki ave muprofita wake wekutanga kutaurwa muBhaibheri. Chinoita kuti tidaro ndechokuti Mwari akaita kuti Judha munin’ina waJesu anyore mashoko euprofita akanga ataurwa kare kare naInoki. *
Inoki akaprofita kuti kudii? Akati: “Tarirai! Jehovha akauya nemakumi ake ezviuru zvengirozi tsvene, kuti atonge vose, uye kuti ape mhosva vose vasingadi Mwari pamusoro pemabasa avo ose okusada Mwari avakaita nenzira yokusada Mwari, uye pamusoro pezvinhu zvose zvinoshamisa kwazvo zvakataurwa pamusoro pake nevatadzi vasingadi Mwari.” (Judha 14, 15) Waona here kuti Inoki ari kutaura sekunge kuti zvinhu zvacho zvakatoitika? Ndiwo manyorerwo akaitwa uprofita hwakawanda hwakazotevera. Sei hwainyorwa saizvozvo? Muprofita aitaura zvinhu sekunge kuti zvakatoitika nemhaka yekuti zvinhu zvaaitaura zvaitoti zviitike chete!—Isaya 46:10.
Inoki haana kutya kutaura shoko raMwari kuvanhu vaityisa
Unofunga kuti Inoki ainzwa sei paaiudza vanhu mashoko aya? Akadzokorora ka4 mashoko ane simba airatidza kuti vanhu ava vakanga vasingadi Mwari. Mashoko acho ainyatsofumura mabasa akaipa avaiita. Uprofita hwacho hwairatidza kuti zvinhu zvavakanga vava kuita kubva pakadzingwa Adhamu muEdheni zvakanga zvanyanya kuipa. Jehovha aizoparadza vanhu ivavo paaizouya nemauto “engirozi tsvene.” Inoki haana kutya kuvaudza izvozvo uye akazviita ari oga! Rameki akanga achiri mudiki uye zvimwe aishamiswa neushingi hwaiva nasekuru vake. Kana zviri izvo zvakaitika, hazvingambotishamisi.
Kutenda kwaInoki kunogona kuita kuti mumwe nemumwe wedu azvibvunze kuti maonero aanoita zviri kuitika munyika akafanana here neaMwari. Shoko raiparidzwa naInoki rokuti vanhu vakaipa vachaparadzwa richiri kushandawo nanhasi. Jehovha akaita zvaakanga audza Inoki, achibva ashandisa Mafashamo kuparadza vanhu vakaipa vemunguva yaNoa. Mwari achaparadzazve vanhu vakaipa uye kuparadza kwacho kuchange kwakakura kudarika zvaakaita mumazuva aNoa. (Mateu 24:38, 39; 2 Petro 2:4-6) Sezvaakaita kare ikako, iye zvino Mwari nengirozi dzake vakamirira nguva yekuti vaparadze vanhu vakaipa. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuteerera zvaitaurwa naInoki, ozviudzawo vamwe. Hama neshamwari dzinogona kusatifarira, tobva tatanga kuzviona sezambiringa munyemba. Asi Jehovha haana kumbosiya Inoki uye haasi kuzombosiya vashumiri vake vakavimbika!
“AKATAMISWA KUTI ASAONA RUFU”
Inoki akazofa sei? Mafiro ake haanzwisisiki uye anoshamisa. Muna Genesisi tinongoudzwa kuti: “Inoki akaramba achifamba naMwari wechokwadi. Haana kuzovapo, nokuti Mwari akamutora.” (Genesisi 5:24) Zvinorevei kuti Mwari akamutora? Muapostora Pauro akazozvitsanangura achiti: “Nokutenda Inoki akatamiswa kuti asaona rufu, uye haana kuzomboonekwa nokuti Mwari akanga amutamisa; nokuti asati atamiswa akapupurirwa kuti akanga anyatsofadza Mwari.” (VaHebheru 11:5) Pauro airevei paakati Inoki “akatamiswa kuti asaona rufu”? Mamwe maBhaibheri anoti Inoki akaenda kudenga. Asi handizvo, nekuti Bhaibheri rinoratidza kuti munhu wekutanga akamutswa kubva kuvakafa achibva aenda kudenga ndiJesu Kristu.—Johani 3:13.
Saka zvinorevei kuti Inoki “akatamiswa kuti asaona rufu”? Zvimwe Jehovha akaita kuti Inoki afe rufu rwusingarwadzi, panzvimbo pekumusiya achiurayiwa zveutsinye nevavengi vake. Asi Inoki asati afa, “akapupurirwa kuti akanga anyatsofadza Mwari.” Zvakaitika sei? Nguva pfupi Inoki asati afa, Mwari anogona kunge akamuonesa nyika yava paradhiso. Izvozvo zvairatidza kuti Mwari aimufarira uye Inoki akabva azorora. Muapostora Pauro paainyora nezvaInoki uye varume nevakadzi vakavimbika akati: “Ivava vose vakafa vachitenda.” (VaHebheru 11:13) Vavengi vake vanogona kunge vakatsvaga chitunha chake, asi ‘hachina kuzomboonekwa,’ zvimwe nekuti Jehovha akaita kuti chinyangarike kuti vasaita zvavanoda nacho kana kuti vasachishandisa pakunamata kwenhema. *
Tichifunga zvataurwa izvi zvinobva muMagwaro, ngatichifungidzirai kuti Inoki anogona kunge akafa sei, asi ngatizivei kuti anogona kunge ainewo mamwe mafiro aakaita. Inoki akanga achitiza uye akanga ava kufemera pamusoro. Akanga achidzingirirwa nevanhu vaimutambudza uye vakanga vachipupa nehasha nemhaka yeshoko raaiparidza. Inoki akawana pekumbohwanda achibva amboti zororei, asi aiziva kuti vachapedzisira vamubata chete. Ainge atarisana nerufu rwunorwadza. Paanga akazorora, akanyengetera kuna Mwari wake. Akabva anzwa kakugadzikana. Zvaakaoneswa naMwari zvakaita kuti ambokanganwa zvanga zvichiitika, achibva atozviona ava muparadhiso.
Inoki anogona kunge aida kuurayiwa zveutsinye Jehovha paakamutora
Fungidzira achiona nyika yakasiyana nekure neyaakanga ajaira. Yainge yakanaka semunda weEdheni, asi pakanga pasina makerubhi aichengetedza nzvimbo iyi kuti vanhu vasapinda. Maiva muzere varume nevakadzi vakanga vaine utano uye vachiratidza kuti vachiri kuzvinzwa. Vose vaigarisana zvakanaka. Makanga musina zvinhu zvaakanga ajaira kuona zvakadai sekuvengana kana kuti kutambudzwa nenyaya yekuti uri munamati waJehovha. Inoki akanyatsoona kuti Jehovha aimuda uye aifarira zvaakanga achiita. Akanyatsoona kuti nzvimbo iyi ndiyo yainyatsoenderana naye; uye kuti rimwe zuva aizoigara. Inoki zvaairamba achiwedzera kugadzikana, akabva atsinzina achibva abatwa nehope, ndiye sarai.
Nanhasi achakafa, uye Jehovha Mwari achiri kumuyeuka! Sekuvimbisa kwakazoita Jesu, pachasvika zuva rekuti vose vanoyeukwa naMwari vachanzwa inzwi raKristu, vomuka kubva kumakuva, voona nyika itsva yakanaka ine vanhu vanogarisana zvakanaka.—Johani 5:28, 29.
Unodawo here kuzorarama munyika iyoyo? Fungidzira kufara kwauchaita pauchaona Inoki. Funga zvinhu zvatisingazivi zvaachazotiudza! Achazotiudza kuti zvataifungidzira kuti ndizvo zvakaitika paakanga ava kufa ndizvo here. Asi pane chimwe chinhu chatinofanira kudzidza kwaari iye zvino. Paakapedza kutaura nezvaInoki, Pauro akati: ‘Pasina kutenda hazvibviri kunyatsofadza Mwari.’ (VaHebheru 11:6) Izvi zvinoita kuti tide kutevedzera kutenda kwakasimba kwaiva naInoki!
^ ndima 14 Dzimwe nyanzvi dzeBhaibheri dzinoti zvakanyorwa naJudha akazviwana mubhuku reapokirifa rinonzi Book of Enoch. Bhuku iri rizere nengano uye harizivikanwi kuti rakabvepi uye vamwe vanonyepa vachiti rakanyorwa naInoki. Mashoko euprofita aInoki arimo ndeechokwadi asi hatizivi kuti akaita zvekukopwa here kana kuti wacho akaanyora akaita zvekuudzwa nevamwe. Judha anogona kunge akakopawo kana kuti akaudzwa nevamwe nezvaInoki. Anogonawo kunge akaudzwa naJesu sezvo Jesu akanga ari kudenga achiona zvaiitika muupenyu hwaInoki.
^ ndima 20 Ichi chinogona kunge chiricho chikonzero chakaitawo kuti Mwari anyangarise chitunha chaMosesi nechaJesu.—Dheuteronomio 34:5, 6; Ruka 24:3-6; Judha 9.
Zvinonyatsoita Here Kuti Tifadze Mwari?
Mhinduro yacho tinogona kuiwana pane zvakaitika kuna Jobho, Roti, uye Dhavhidhi, avo vakamboita zvikanganiso zvakakura.
Nhamba 1 2017 | Zvaungaita Kuti Ubatsirwe neBhaibheri
NHARIREYOMURINDI Nhamba 1 2017 | Zvaungaita Kuti Ubatsirwe neBhaibheri
Ribheka: “Ndinoda Kuenda”